कसरी Binance लिक्विड स्वैप - Cazoo को साथ क्रिप्टो मुद्राहरू कमाउने
घर » घर » Binance लिक्विड स्वापको साथ कसरी क्रिप्टो मुद्राहरू कमाउने
ट्याग: Binance तरल स्वैप, स्थायी घाटा, तरलता प्रदायक, स्थायी घाटा, तरलता पोखरी, Stablecoin, Yield, उत्पादन खेती
यदि यो तपाइँको पहिलो पटक यहाँ छ भने, स्वागत / स्वागत छ!
यहाँ काजुमा म मेरो नोटहरू ट्रान्सक्रिप्ट गर्दछ मेरो यात्रामा क्रिप्टो मुद्राको यो सबै भन्दा कम-उजाड भूमिमा। म यो किन गर्छु? किन म यो आफैंमा राख्दिन? किन सेयरि Car्ग केयरि। हो! मैले सिकेका सबै कुरा मैले कसैलाई पढेर वा कसैको सामग्रीको सल्लाहबाट सिकेको छु। समुदायलाई फिर्ता दिन समय।
तपाईं यसको कदर गर्नुहुन्छ? Binance मा साइन अप गर्नुहोस्, यदि तपाईं अझै दर्ता हुनुहुन्न भने, मेरो रेफरल कोडको साथ! मेरो रेफरल आईडी EIXFBK06 हो, वा तपाईं यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ.
पहिले नै उल्लेख गरिसकिएझैं काजु एक ट्राभेलोगुल हो, म वित्तीय सल्लाहकार होइन। पैसा खर्च गर्न गल्ती नगर्नुहोस् जुन तपाईं सहन सक्नुहुन्न। लगानी धेरै जोखिमपूर्ण छ: यदि तपाईं होशियार हुनुभएन भने तपाईंले आफ्नो फन्डहरूको ट्र्याक हराउनुभयो भने, तपाईं आफूले अनुसरण गर्न चाहानुभएको अपरेशनहरूसँग निरन्तर संघर्ष गर्न संघर्ष गर्नु हुन्छ। म तपाईलाई एक मात्र सल्लाह दिन सक्छु, सावधान / सावधान रहनुहोस्।
Binance तरल स्वैप के हो
कसरी Binance लिक्विड स्वैप क्रिप्टो मुद्राको मूल्य निर्धारण गर्छ?
किन Binance तरल स्वैप?
कसरी Binance तरल स्वैप काम गर्दछ?
तरलता स्वैपबाट तपाईं कसरी पैसा कमाउनुहुन्छ?
क्राइप्टो जोडीमा तरलता प्रदान गर्न कत्तिको फाइदा छ?
तपाईं लाभ र घाटा कहाँ देख्नुहुन्छ?
बिनान्स लिक्विड स्वप सिद्धान्तमा आधारित छ, "तरलता पोखरी" को DeFi संसारमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ (तरलता पोखरी) क्राइप्टोकरन्सीहरू व्यापार गर्न।
क्रिप्टोको मूल्य तरलता पूलमा क्रिप्टो करन्सीहरूको मात्राले निर्धारण गर्दछ.
कसरी Binance लिक्विड स्वैप क्रिप्टोकरन्सीको मूल्य निर्धारण गर्दछ?
Binance लिक्विड स्व्यापले लेनदेन शुल्क र दुई cryptocur मुद्रा बीच मूल्य निर्धारित गर्न एक विशेष सूत्र प्रयोग गर्दछ। क्रिप्टो मूल्यहरूमा कसले प्रभाव पार्छ? व्यापारीहरू, जसले तरलता पूलमा रकम आदान प्रदान गर्दछ। त्यस्तै, तरलता पूलबाट रकम थप्ने र हटाउने व्यापारीहरू बजार निर्माणमा संलग्न छन् (जसमा हामी अक्सर एएमएम पढ्छौं, स्वचालित बजार निर्माता)।
बिनान्स लिक्विड स्वपको माध्यमबाट, जो क्रिप्टोकरन्सीहरू बीच ट्रेड गर्न चाहन्छन् उनीहरूले छिट्टै आदानप्रदान गर्न सक्दछन्। तर त्यो सबै होइन!
यो पनि सम्भव छ पोखरीमा तरलता थपेर ब्याज कमाउनुहोस्.
सेकेन्डमा क्रिप्टो करन्सीहरू विनिमय गर्नुहोस्- यस प्रक्रियाको अवधिमा, सानो लेनदेनले कुनै स्प्रेड उत्पन्न गर्दैन, जबकि ठूला लेनदेनले यसलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा कम गर्दछ slippage विनिमय मार्फत। व्यापारीहरूले स्थिर मूल्य निर्धारण र प्रतिस्पर्धी आयोगहरूको मजा लिन सक्छन्।
नगद थप्नुहोस् र होल्डिंगबाट ब्याज कमाउनुहोस्पोखरीमा तरलता थप्ने व्यापारीहरूले पोखरी लेनदेनले उत्पन्न गरेको शुल्कको केही अंश कमाउँछन् र क्रिप्टो मुद्राको ब्याजमा रमाउँदछन्। नोट गर्नुहोस्- पोखरीमा वास्तविक सहभागितामा आधारित पोखरीबाट रकमहरू हटाउन सकिन्छ। हटाउनेबाट समानुपातिक रूपमा चयन गरिएको जोडीको दुई मुद्राहरू प्राप्त गर्न सम्भव छ, वा यो मात्र एक प्राप्त गर्न छनौट गर्न सम्भव छ। यदि तपाईं केवल एक cryptocurrency प्राप्त गर्न छनौट गर्नुभयो भने, तपाईंले लेनदेन शुल्क तिर्नु पर्छ, जुन तपाईं पाउनुहुने रकमबाट कटौती हुनेछ।
Binance लिक्विड स्वाप प्रयोग गर्न सुरु गर्नको लागि तपाइँ फाइनान्स> लिक्विड स्वपमा जानु पर्छ।
Binance: वित्त> तरल स्वप
भित्र तपाईले दुई प्रकारका उत्पादनहरू देख्नुहुनेछ: स्थिरeअभिनव.
स्थिर उत्पादन र इनोभाटोइन उत्पादन
स्थिर स्थिर Bcd र DAI को रूपमा तरलता पूल, सन्दर्भ दिन्छ।
अभिनव को तरलता पूल बुझाउँछ अधिक अस्थिर सम्पत्ति, जस्तै ETH, BTC र पनि GBP, पनि फिएट मुद्रा।
नगद पोखरीमा तपाईंको सम्पत्ति थपे पछि, तपाईंलाई एक दिइनेछ शेयर, तपाईंलाई एउटा (धेरै सानो) भाग दिइनेछ। जब पनि त्यो तरलता पोखरी भित्र स्वाप हुन्छ, कमिशनको एक अंश तपाईंलाई दिइनेछ, तपाईंको शेयरको आधारमा, तपाईंको शेयर। अती सजिलो।
Binance तरलता स्वैप: शेयर तरलता दिएर प्राप्त
तरल स्वपको शीर्षमा उत्पादनको एक अनुमान छ, ब्याज कमाएको, जोडीहरूको लागि तरलता दिइन्छ।
सिक्काको जोडीको लागि उपजको, उपजको अनुमान
कुल फिर्ताको हिसाब र सबै ट्रेडिंग शुल्क तिरेको ब्याज पहिचान गर्दछ कि एक सूत्र मा आधारित गणना गरीन्छ।
सूत्र: (हिजो तिरेको कुल ब्याज हिजो + हिजो कुल ट्रेडिंग शुल्क) हिजो पूलको कुल मूल्य हिजो * 365 XNUMX।
एउटा सिक्का जोडीमा होभरिले तपाईंलाई यसको उपज संरचना देखाउँदछ।
फाइदा र घाटा मेरो सेयरमा देखाइन्छ र अमेरिकी डलरमा राखिन्छ।
Binance लिक्विड स्वैपमा कसरी उत्पादन फार्मिंग आय जाँच गर्ने
के क्रिप्टो पार्क गर्नु भएकोले केहि गर्नु हुँदैन? तिनीहरूलाई क्रिप्टोकुराँसीमा स्थिर निष्क्रिय आय राख्न भाडामा लिनु खराब विचार होइन, के तपाई सोच्नुहुन्न?
तर यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि इनोभेसन को तरलता पूलहरू उच्च अस्थिरतासँग सम्बन्धित छन्, बजार विनिमय दरहरू र पोखरीको आकारका कारण। यी कारकहरूले तपाईको २ 24 घण्टाको अवधिमा लगानी गरेको मानमा ठूलो उतार चढाव हुन सक्छ।
तपाईं एक बन्न पनि भने लिपिबद्ध प्रदायक धेरै लाभदायक हुन सक्छ, स्थायी घाटा को एक सबै चीज गुमाउन जोखिम छैन क्रम मा बुझ्न को लागी एक मूल कुञ्जी अवधारणा हो।
हामी छिट्टै यसको बारेमा कुरा गर्छौं।
म तपाईंलाई सम्झाउँछु कि यदि तपाईंले अझै बाइनान्सलाई लेख्नु भएको छैन भने, तपाईं यो गर्न सक्नुहुन्छ यस लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्। र तपाईंसँग कमिसनहरू छन् २०% बाट छुटसधैंभरि!
अर्को लेखAMM, स्वचालित बजार निर्माता के हो?